Kenya oo shuruud ku xirtay inay Ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya - Awdinle Online
Kenya oo shuruud ku xirtay inay Ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya
“Runtrii maba jiraan waxyaabo u baahan in la kala caddeeyo. Kenya waxay qeyb ka tahay waddamada ay ciidamadooda ku jiraan Amisom. Waxaan halkaas ku tagnay qaraar kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Laakiin waa la ogyahay in howlaha aan Soomaaliya ka wadno ay goor horeba sii socdeen laga soo billaabo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991-1992-kii,” ayey tidhi Juma.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey sheegtay in dhowr arrimood uun ay keeni karaan in ciidamada Kenya laga soo saaro Soomaaliya, waxayna tiri: “Sabab ayaan Soomaaliya u tagnay, dabcanna way jiraan shuruudo ku xiran in annagoo Amisom la mideysan aan ka soo baxno halkaas. Shuruudahaas waxay kala yihiin; In nabad laga hirgaliyo Soomaaliya, in laga adkaado Al-Shabaab iyo in laamaha gudaha ay awood u yeeshaan sugidda amniga.”
Previous articleAl-Shabaab oo madaafiic ku weeraray Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamada Itoobiya
Next articleJubbaland oo digniin kasoo saartay dadka loo xiro Shabaabnimo